सपना देखाएकै हो, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो « Jana Aastha News Online
सपना देखाएकै हो, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो
प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७७, बुधबार ०८:१८
तीन वर्षअघि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघलाई संबोधन गर्ने क्रममा राख्नुभएका तथ्यले अरु देशका नेतालाई पनि सोच्न बाध्य पार्‍यो । त्यसैगरी, देश र जनतालाई निरन्तर देखाउनुभएको नयाँ सपनाले पनि सबैलाई तरङ्गित बनाएकै हो । पानीजहाजदेखि रेल्वेसम्मको सपनाले भूपरिवेष्ठित र विकट पहाडी भूभागका जनतालाई अर्कै ढंगले तरंगित र रोमाञ्चक बनाइदिएको थियो । टनेल,फाष्ट ट्रयाक र फराकिला सडकदेखि सबै कुरामा जागृत सपना देखाउँदै नेपाली समाजको यथास्थिति विकासको योजनालाई पनि क्रमभंग गर्नुभएकै हो ।
पाँच वर्षअघिको भूकम्पताका विपक्षमा रहेपनि तत्कालीन एमाले कार्यकर्ता परिचालनमा ओलीले राम्रै अग्रसरता लिनुभएको थियो । त्यसले एमालेको उचाई बढाउने काम गर्‍यो । एमाले कार्यकर्ताले गरेको अतुलनीय मानवीय सहयोगले भूकम्प पीडितको मन साँच्चिकै जितेको थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर रहेका चिन्तामणि सिवाकोटी पार्टी निर्देशनअनुसार खटिँदा ठूलो दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो । उद्धारको लागि स्वयम्भू नजिकै भूकम्पले थिलथिलो भएको घरको छानोमा सिवाकोटी उक्लिँदा छानो गर्लम्म झरेको थियो । छानोसहित झरेका उहाँलाई धन्न ठूलो चोट लागेन । त्यस्तो दुर्घटना मुलुकका धेरै ठाउँमा एमाले कार्यकर्ताले भोगेका छन् ।
मन्त्री रहिसकेका लालबाबु पण्डित पनि त्यसैगरी उद्धार र राहतमा दिनरात खट्नुभयो । निर्वाचनपछि एमालेमा माओवादी मिसियो । उसका वाईसीएललगायत जनवर्गीय संगठनहरु पनि एकीकरणपछि समाहित भए भनियो तर दश महिनादेखि व्याप्त विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीमा विगतमा एमालेझैँ नेकपा परिचालन भएको देखिएन । सरकार र स्थानीय तहका वडालाई देखाइयो । तर पार्टी पंक्तिलाई खट्न भूकम्पमा जस्तो कतै निर्देशन पनि भएन, कार्यकर्ता परिचालन भएको समेत देखिएन ।
नेपाली जनता अशिक्षित छन् । तिनलाई नयाँ रोग र महामारीको बारेमा बुझाउने काम पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर कहिँ कतै छिसिक्कसमेत गरेको देखिएन । कम्तिमा माइकिङ्ग र मास्क वितरण गरेर भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी बनेको सन्देश दिनुपर्नेमा माखो मारेको पाइएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सयौंदेखिको अकण्टक भित्रिया सम्बन्धलाई चिर्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा लिनुभएको अडान राष्ट्रहितको लागि दूरगामी महत्वपूर्ण थियो ।
हुन त बालुवाटारले कोटेश्वरलाई सबैभन्दा बढी दपेटैको हो, त्यसमा शंका छैन । सत्ताले वामपन्थी विचार राख्ने र जनताको भावना मुखरित गर्ने जो कोहिलाई राणाकालदेखि नै खेद्ने र पेल्ने गरेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ध्रुवसत्य हो । तर,हालै बबरमहलस्थित एउटा ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा बलिदान गरेका सहीदहरुलाई स्मरण गरेको मात्र भन्नुले त्यसअघिका वामपन्थी र अन्य राजनीतिक सहीदको अपमान भएन र ? त्यसबारेमा नबोल्दा वामपन्थी घेरालाई साँघुरो बनाइएको पो हो कि भन्ने भान धेरैलाई परेको छ । नेपालमा सत्ताधारीहरुले वामपन्थीहरुलाई २००६ सालदेखि नै सहीद बनाउने क्रम शुरु गरेको सत्य हो ।
उता,गृहमन्त्री बादलले बालुवाटारमा सरकारी सुरक्षा घेराभित्र बसेर ठोकेको भाषण दुई दशकअघि रोल्पामा जनसेनाको बीचमा रहेर गरेकोभन्दा कम थिएन । अढाई दशकदेखि अत्यधिक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएको एमाले र अझैसम्म जनयुद्धको धङधङी बोकेको माओवादीका नेताहरु जताको ग्रुपमा बसे पनि पुरानो बानी हटेको चाँहि देखिएन है ?
– नेकपामा आएको फुटपछि विरक्तिएको एमाले कार्यकर्ता